Kulan looga hadlayo hormarinta garoonka C/laahi Yuusuf oo Galkacyo ka dhacay – Radio Daljir
Diseembar 1, 2012 4:24 b 0
Gaalkacyo, 01-Dec – Waxaa barqanimaddi maanta kulan ballaaran xarunta maamulka gobolka Mudug ku qaatay saraakiil ka socday wasaaradda duulista hawada iyo garoomada PL iyo ganacsatada Gaalkacyo qaarkood.
Kulan ayaa lagu gorfaynayay qaabka ugu habboon ee ganacsatadu ay oga qayb qaadan karaan dhismaha waddooyinka garoonka diyaaradaha qaarkood iyo waliba hormarin laga wado garoonka taasoo ay waddo dawladda PL gaar ahaan wasaaradda u qaabilsan.
Kulankaasi oo ay ka dhex muuqdeen madaxda ururada ganacsatada iyo hantiilayaasha magaalada ayay ganacsatadu dalbadeen inay dib isugu laabtaan ka dibna ay ay dawladda la hor-imaan doonaan mawqif iyo qorshe cad oo ay arintaasi kaga qayb qaadanayaan.
Kulankaasi oo saacado qaatay ka dib ayaa waxaa shir-jaraa’id warfidyeenka u qabtay k/simaha wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada C/qani Geele Maxamed, waxaana uu ifiyay nuxurka shirkii dhex maray iyaga iyo ganacsatada.
Geele, ayaa tilmaamay inay si wanaagsan isku fahmeen ganacsatada lagana wada hadlay hor-marinta iyo dayactirka gagida diyaarada gaar ahaan dhismaha waddooyinka galo iyo kuwa diyaaraduhu ay ku ordaan, sidoo kale waxaa uu wasiirku sheegay in qorshahani uu qayb ka yahay barnaamijyo ballaaran oo xukuumadda xiligan jirta ee m/weyne faroole ay ku hor-marinayso garoomadda PL.